Kitra – «Poule des As» : tsy ho any Fianarantsoa ny Elgeco sy ny Hzam ary ny Cosfa | NewsMada
Kitra – «Poule des As» : tsy ho any Fianarantsoa ny Elgeco sy ny Hzam ary ny Cosfa
Mandrangaranga ny tsy handray anjara, amin’ny lalao miverina hiadiana ny «Poule des As », amin’izay ho tompondakan’i Madagasikara ny Elgeco Plus sy ny Hzam ary ny Cosfa.
Nanambara, tamin’ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, ny talata lasa teo teny amin’ny Live Hotel Andavamamba, ireo mpitantana ny Elgeco Plus sy ny Cosfa ary ny Hzam Amparafaravola, izay mifaninana amin’ny “Poule des As”, fa tsy manaiky ny hanatontosana ny lalao miverina any Fianarantsoa, ny 8 – 12 novambra ho avy izao, araka ny fanovana nataon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF).
“Efa nifanarahana fa ny 12 – 19 novambra, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, no hanaovana ny lalao miverina fa tsy any Fianarantsoa, izay efa nanaovana ny lalao mandroso. Noho izany, mangataka izahay ny hitazonana ny toerana sy ny datin’ny fifaninanana fa tsy ovaina”, hoy Randriamanampisoa Alfred, filohan’ny Elgeco Plus. Tetsy ankilany, nanamafy Ralambo Jocelyn, mpitantana ny Cosfa, fa efa voafetra ny tetibolan’ny ekipa amin’ny fiatrehana ity “Poule des As” ity. Mitovy hevitra amin’izy roa tonta ireo ny Hzam, izay tsy afaka nanatrika ity dinika tamin’ny mpanao gazety ity, noho ny halaviran’ny toerana misy azy ireo.
Araka izany, nandefa taratasy any amin’ny federasiona izy ireo, ary manome 48 ora hamaliana io fangatahana io.
Miankina amin’ny federasiona
Hiankina amin’ny valin-tenin’ny federasiona ny fanapahan-kevitra horaisin’ireo ekipa telo, raha ny filazan’izy ireo. “Miandry ny valin-tenin’ny federasiona izahay. Efa malalaka ny fanaovana hetsika satria efa hiditra amin’ny 6 novambra ny mpianatra, raha ny navoakan’ny fanjakana. Raha sanatria ka tsy mbola mety ny hanaovana izany, aleo atao “match à huis clos”, toy ny natao tany Fianarantsoa”, hoy hatrany Randriamanampisoa Alfred.
Nanamafy ny mpitantana eo anivon’ny Elgeco Plus fa tokony hampitoviana ny ekipa tsirairay avy fa tsy misy omena tombondahiny ka milalao amin’ny 3 ora tolakandro foana. “Fitivan-tena ilay izy”, hoy Rakotondranivo Julmont Yves, PCA-n’ny Elgeco Plus. Nomarihin’ireo mpitantana ny klioba telo tonta ireo koa fa tsy ampy ny fotoana hialan’ny mpilalao sasatra satria tsy misy afa-tsy 24 ora monja dia efa miakatra kianja.